Umgomo wokusebenza nokwakheka kwesikrini sokudlidliza komugqa | Haiside
You are here: Home / Izindaba / Uncategorized @zu / Isingeniso kumgomo wokusebenza nokwakheka kwesikrini sokudlidliza komu...
Isikrini esidlidlizayo yimishini yokuhlola esetshenziselwa ukukhiqizwa kwezimayini zamalahle, izinto zokwakha nezinye izimboni. Ngokuya nge-trajectories ehlukile, izikrini zokudlidliza zingahlukaniswa zibe izikrini ezihamba phambili zokudlidliza, izikrini eziyindilinga zokudlidliza, njll. Phakathi kwazo, isikrini sokudlidliza komugqa sisebenzisa imoto yokudlidliza njengomthombo wokudlidliza, ukuze impahla iphonswe phezulu esikrinini bese iya phambili ngomugqa oqondile. Isiphakeli singena ngokulinganayo ethekwini lokuphakelayo lomshini we-sieving, futhi ukwedlulela ngaphezulu nangaphansi kokucaciswa okuningana kukhiqizwa ngesikrini semigqa eminingi futhi kukhishwe ezitolo zazo.
1. Isimiso esisebenzayo somugqa wesikrini sokudlidliza
Umgomo wokusebenza kwesikrini sokudlidliza komugqa ukuthi imiphini yemishini emibili yokudlidliza ine-angle yokuthambekela ehlobene nobuso besikrini. Ngaphansi kwamandla ahlanganisiwe wamandla ajabulisayo kanye namandla adonsela phansi uqobo lwento, impahla iphonswa phezulu futhi igxume iye phambili ebusweni besikrini ukuze iqhubekele phambili ngomugqa oqondile, ukuze kufezekiswe Inhloso ebonakalayo yokuhlola nokubamba.
Isikrini sokudlidliza komugqa siqhutshwa ama-motor amabili adlidlizayo. Lapho ama-motor amabili adlidlizayo azungeza ngokuvumelanayo futhi ezinhlangothini eziphikisanayo, amandla athokozisayo akhiqizwa ngamabhulokhi eccentric akhansela omunye nomunye esiqondisweni esifana ne-motor axis, kanye nezitaki ohlangothini olubheke ngaku-eksisi yemoto. Ngenxa yalokho, umugqa wesikrini ulayini oqondile.
Inqubo yokuhlola: Ngemuva kwenani elikhulu lezinto eziphukile ezinosayizi wezinhlayiyana ezihlukene nezinhlayiya ezixubile nezinhle zingena ebusweni besikrini, kuphela ingxenye yezinhlayiya ezixhumana nobuso besikrini. Ngenxa yokudlidlizela kwebhokisi lesikrini, ungqimba lwezinto ezibonakalayo esikrinini luyaxegiswa, ukuze izikhala ezikhona ezinhlayiyeni ezinkulu zisuswe. Ukwanda okwengeziwe, izinhlayiya ezincane zithatha ithuba lokudlula esikhaleni, zidluliselwe kusendlalelo esingezansi noma ukuhambisa. Ngoba igebe phakathi kwezinhlayiya ezincane lincane futhi izinhlayiya ezinkulu azikwazi ukudlula, ilungiselelo lokuqala lokungahleleki kwezinhlayiya lehlukanisa, okungukuthi, zihlukaniswe ngosayizi wezinhlayiyana, kwakheka umthetho wokuhlelwa ngezinhlayiya ezincane ezansi nezinhlayiya ezigqamile ngaphezulu .
Ukwakheka kwesakhiwo kwesikrini sokudlidliza komugqa
Isikrini sokudlidliza komugqa ngokuvamile sakhiwa isidlidlizi, ibhokisi lesikrini, idivayisi yokusekela noma yokumisa, idivaysi yokudlulisela nezinye izingxenye.
1. Isidlidlizi sesikrini esidlidlizayo: isihenqo esidlidliza nge-shaft kanye nesidlidlizi sesikrini esidlidliza kabili sihlukaniswa ukulungiswa kabusha kwe-eccentric, futhi ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili. Uhlobo lwe-block eccentric lungcono ekucushweni kwesisindo se-eccentric.
2.Ibhokisi lesikrini elidlidlizayo: Ibhokisi lesikrini lakhiwe ngohlaka lwesikrini, indawo yesikrini nedivayisi yalo yokucindezela. Uhlaka lwesikrini lwakhiwe ngamapuleti ohlangothini nemishayo. Uhlaka lwesikrini kufanele lube lukhuni ngokwanele. Isetshenziselwa ukugcina isikrini sicabalele futhi sifinyelele ukuhlolwa okujwayelekile. Ibhokisi lesikrini liyingxenye eyinhloko yesikrini esidlidlizayo.
3.Idivayisi eshukumisayo esekelayo yedivayisi: Idivayisi esekelayo yesikrini esidlidlizelayo inezinhlobo ezimbili: uhlobo lokulenga nohlobo lwesihlalo. Ukufakwa kohlobo lwesihlalo kulula, futhi ukuphakama kokufakwa kuphansi. Ngokuvamile, kufanele kukhethwe uhlobo lwesihlalo. Idivayisi esekelayo yesikrini esidlidlizayo yakhiwe kakhulu ngezinto ezinwebeka. Imvamisa kusetshenziswa iziphethu zekhoyili, izipuleti zamapuleti nemithombo yenjoloba.
4. Intwasahlobo yesisefo sokuthambisa intwasahlobo: ivimbela ukudlidliza ukuthi kungadluliselwa phansi, ngenkathi kusekelwa isisindo esigcwele sebhokisi lesikrini. Lapho ifakiwe, intwasahlobo iqondana nomhlabathi.
5.Idivayisi yokudlulisa isikrini sokudlidliza: Isikrini sokudlidliza ngokuvamile sisebenzisa idivaysi yokudlulisa i-V-belt. Ukwakheka kwesikrini esidlidlizelayo kulula. Inani lezinguquko zesidlidlizi lingakhethwa ngokungafanele. Noma kunjalo, ibhande kulula ukushelela ngesikhathi sokusebenza. Kungadala ukuthi i-sieve ivinjwe. Izikrini zokudlidliza nazo ziqhutshwa ngqo ngokuhlangana. Ukuhlanganiswa kungagcina inani elizinzile lezinguquko zesidlidlizi. Futhi inempilo ende yokusebenza. Kodwa-ke, kunzima ukulungisa inani lezinguquko zesidlidlizi.
3. Izici komugqa isixwayisi screen
（1） Ukusebenzisa i-block eccentricity njenge-excitation force, amandla amakhulu wokuzijabulisa;
（2, Ugongolo lwesikrini nebhokisi lesikrini lamukela imishudo enamandla amakhulu, ngesakhiwo esilula nokunakekelwa okulula nokusheshayo;
（3, Usebenzisa ukuhlangana kwamasondo, ukuxhumana okuguqukayo, ukusebenza okuzinzile;
Structure 4, Isakhiwo se-amplitude encane, imvamisa ephezulu kanye ne-angle enkulu yokuthambekela kwenza umshini uphakame ekusebenzeni kahle kokuhlola, impilo ende, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi nomsindo ophansi;
） 5, Idizayini yengxenye yesikrini ingasishintsha ngokushesha isikrini nokungezwani ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, lo mklamo uvumela ukusetshenziswa kwezikrini ezahlukahlukene, njengeyiloni, amadragoni akhethekile, amanetha e-PP, njll .;
Material 6, Indaba inesifo sohlangothi eside ebusweni besikrini, ukunemba kokuhlola okuphezulu namandla wokucubungula amakhulu;
（7） Ngesikhathi esifanayo sokuhlunga, ukuhamba ibanga elide kwezinto;
（8） Isikhala nokuthambekela kwendawo yesikrini kungashintshwa ngokuya ngosayizi wezinto ezibonakalayo, amathuba okungena esikrinini, nokukhiqiza;
Shapes 9） bobunjwa ezahlukene kanye nezakhiwo kungenziwa yakhelwe ngokuvumelana indawo ukukhiqizwa.
Lokhu okungenhla kuyisingeniso kumgomo wokusebenza nokwakhiwa kwesakhiwo kwesikrini sokudlidliza komugqa. Kungabonakala ukuthi ithrekhi yokunyakaza kwesikrini sokudlidliza okuqondile kungumugqa oqondile, ngakho-ke impahla iphonswa phezulu ebusweni besikrini futhi iqhubekela phambili kulayini oqondile. Ngaphansi “kokubambisana” kwamandla adonsela phansi, izinto zingahlolwa futhi zihlukaniswe.
Isikrini sokudlidliza komugqa ngokuvamile sakhiwa isidlidlizi, ibhokisi lesikrini, idivayisi yokusekela noma yokumisa, idivaysi yokudlulisela nezinye izingxenye. Isikrini esidlidlizelayo esikhiqizwa yi-Hiside Heavy Industries sinamandla amakhulu, asinazinsimbi, futhi sinezinsimbi eziqinisayo ezakhelwe ngaphakathi, ezinciphisa isisindo somshini wonke, ngenkathi sithuthukisa ukuqina komshini wesikrini, osebenza kahle kakhulu nokonga amandla.
Ngeminye imininingwane mayelana nesikrini sokudlidliza komugqa, sicela uchofoze ukuvakashela:
Yiziphi izindlela ze-sieve zesikrini esiqondile sokudlidliza?
Imiyalo yokusetshenziswa kwesikrini sokudlidliza komugqa Yimiphi imingcele yenqubo yesikrini esidlidlizayo? Ungabala kanjani?